Siye kwi-2020 ISE, eNetherlands
I-2020 ISE ibibanjelwe eAmsterdam ukusukela ngoFebruwari 11 ukuya ku-14. umboniso obanzi eYurophu.
I-ISE ngumboniso waminyaka le, obanjelwe ngu-Infocomm wamazwe aphesheya, eRAI Amsterdam, eNetherlands.
Inkampani yethu ibonise ibhodi yokubhala ye-LCD enezinto ezintsha, ukucima kancinci kunye nokuhambisa kunye nomsebenzi wokugcina, uninzi lwezinto ezisasazekayo zathetha kakhulu ngeemveliso zethu, ezaye zatsala umdla wababukeli abaninzi ababenza ii-Screens ze-All-In-One ukuba babe namava kwaye basebenzisane.
I-Exhibition ye-77 yezixhobo zemfundo eQingdao
I-Abstract: Umboniso wama-77 wezixhobo zeZemfundo waye wabanjelwa eQingdao International Exhibition Centre nge-12, Okthobha, ka-2019. Imveliso emitsha ye-LCD ibhodi emnyama, isisombululo segumbi lokufundela kunye ne-All-in-one PC yatsala iingcali zamashishini amaninzi.
Kuyaziwa ukuba iMiboniso yezixhobo zezeMfundo yase China lelona qonga likhulu lokubonisa kunye nonxibelelwano, kunye nebhakoni yentengiso nayo. I-ILB ebanzi ye-LCD ebhodiweyo iphumeze indlela entsha ngokususa isitshixo, ukucima inxenye, ukuhambisa kunye nokugcina imisebenzi. Imveliso entsha ikwazile ukwamkelwa ngabasasazi, ootitshala, abazali kunye neengcali zeshishini lezemfundo.
I-ILBBLE ye-LCD Ibhodi ehleliweyo eboniswe e-DIDAC ASIA
Ngomhla we-Okthobha 9-11, 2019, I-DIDAC Asia yehlabathi ibanjelwe eBangkok, eThailand. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, lo mboniso ukhule waba luphawu olubalulekileyo lokubonisa ishishini lokuncedisa ukufundisa eMzantsi-mpuma Asia. Idume ngabaphulaphuli bayo abaqhelekileyo kunye nomgangatho ophezulu. Inedumela elihle phakathi kwababonisi baseTshayina. Umboniso ubanjwa minyaka le kwaye liqonga elibaluleke kakhulu kumashishini okuvula imarike yaseThai.
Sifinyelele kwisivumelwano sentsebenziswano neqabane lethu-i-Starcast, ukucwangcisa ngokudibeneyo nokuzimasa lo mboniso, sigxile kwibhodi ye-LCD, ukwenza inkqubo yokufundisa ekrelekrele. Itsale iinkokeli ezininzi zezikolo nootitshala ukuba bayifumane. Umbono wayo wokukhusela uthuli kunye nokusingqongileyo kwezempilo, ukugcina amava okuqala okubhala, kwavunywa kakhulu ziinkokheli kunye nootitshala, kwaye yanika iingcebiso ezininzi ezakhayo.
Kwaye satsala ababonisi abavela eFrance, South Korea naseSpain, abathe bathetha kakhulu ngeemveliso zethu. Phakathi kwabo, ababonakalisi beFrance kunye noMzantsi Korea batsho ngokucacileyo ukuba baya kubonisa iimveliso zethu kumboniso wesiFrentshi kwizixhobo zemfundo, kwaza kwafikelelwa kwintsebenziswano.
Isifundo se-IT Solutions Expo, i-EDIX, Tokyo
Isifundo se-IT Solutions Expo sabanjwa nge-19 kaJuni, ngo-2019, eTokyo, kwi-EDIX ngowona mboniso ubalaseleyo kwaye unempembelelo kakhulu kwizixhobo zemfundo eJapan, lithuba elihle lokukhuthaza uthethathethwano nentsebenziswano, wazisa iimveliso ezintsha kunye nenkonzo .
Simenyiwe ukuba siye kulo mboniso, kwaye sabonisa iimveliso zethu ezintsha-ibhodi yokubhala ye-LCD, izinto ezintsha: ezingenalo uthuli, akukho peni, luhlaza nokucoceka, ukhathalelo lwamehlo, u-eco-friendly, njl. abathengi.
Abasasazi abaninzi banomdla kakhulu kwibhodi yokubhala ye-LCD, banethemba kakhulu kwithemba lokuthengisa.
Umboniso wezixhobo zemfundo ezingama-76 eChongqing
I-Abstract: Ibhodi emnyama ye-LCD ye-ILBEST yalinganiswa "njengeGolden Award Product" kumboniso we-76th Equipment Equipment Exhibition (26th-28, Epreli, ka-2019) kwaye bonwabele ukuthandwa kakhulu phakathi kwabaxumi.
Iziphumo malunga nokungabi nabufutshane kwabakwishumi elivisayo yiKhomishini yezeMpilo yeSizwe ibonisa ukuba izinga lokungaboni kakuhle kwabakwishumi elivisayo yayiyi-53.6% ngo-2018. Umbono wezempilo uthathelwe ingqalelo ngabazali, zizikolo noluntu. Kule meko, iimveliso zononophelo "zamehlo" zazithandwa, kwaye ibhodi emnyama ye-LONBEST ye-LCD yadweliswa phakathi kwabo.
Ayifani nokuboniswa kwe-LCD, ibhodi emnyama ye-ILBEST ye-LCD yamkela itekhnoloji engeyiyo yangasemva ukubonisa ubhalo ngesandla ngokukhanya kwendalo. Ukungabi nathuli, akukho radiation, akukho mfuneko yeetshokhwe / okumakishayo /, ukhathalelo lokubona, ukucima ngokuyinxalenye zizinto ezilungileyo ngaphezulu kwezinye iibhodi. Phantse abangama-30 abasasazi bendawo abavela eChina baba ngamaqabane e-LONBEST.
I-LONBEST yamenywa ukuba ibekho eMnyhadala we-30 eBeijing
I-Abstract: Umboniso wama-30 waseBeijing weMishini yezixhobo zeZemfundo wabanjwa ngempumelelo kwiZiko leNkomfa yaZwelonke ukusukela nge-6-8, Matshi ka-2019.
I-LONBEST inikezelwe kuphando kunye nophuhliso lwebhodi emnyama ye-LCD iminyaka eliqela. Ukusukela kwimveliso enkulu yokucinywa kwebhodi engamaphepha ye-LCD ephambili kunyaka ophelileyo, i-LONBEST ifumene inxenye yomsebenzi wokucoca ukuphucula amava okubhala. Njengoko ibhodi ebalaseleyo ye-LCD ishenxisa ibhodi kwintengiso yehlabathi, itsala amaqabane amaninzi nangakumbi kwiqela le-LONBEST.
I-2019 HONGKONG Electronics Fair
I-2018 Worlddidac Bern